တရုတ်အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump နည်းပညာ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပိုပစ္စည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး၏သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ သတ္တု၊ ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သောင်တူးခြင်းနှင့်အခြားစီးပွားရေးကဏ္inများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော slurry pump pump အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုတောင်အမေရိက၊ အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ရုရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့ရောင်းချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်တညီတညွတ်တည်းချီးမွမ်းခြင်းနှင့်စျေးကွက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
slurry Pump စက်မှုအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မား။ ဖိအားကင်းသောဆီလီကွန်ကာဘိုက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဘိလပ်မြေကာဗိုက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အခြေခံပစ္စည်းမှာ SUS316L နှင့် ၂၂၀၅ ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ပုံသည်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ anti-wear နှင့်ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရှိပြီး၎င်း၏သက်တမ်းသည်သာမန်စက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ slurry pump pump တံဆိပျကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ။
Slurry Pump Fpl ထည့်ပါ
slurry pump ၏ဒိုင်းလွှားသည် slurry pump ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်မှသုတ်နှင့် impeller ကဲ့သို့တူညီသည်
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ Slurry Pump Fpl Insert ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
Slurry pump impeller သည်အဓိကအားဖြင့်စီးဆင်းသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် impeller, pump body, pump အဖုံး၊ volute၊ ရှေ့ကိုယ်ထည်၊ နောက်ရံပြား၊ အရန် impeller၊ box, decompress အဖုံး, labyrinth လက်စွပ်, etc
Slurry Pump ၏စက်မှုအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပျသည်လှည့်သောစက်၏ရိုးတံတံဆိပ်ခတ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနည်းဆုံးအဆုံးမျက်နှာတစ်စုံကိုအလှည့်ဝင်ရိုးနှင့် ပတ်သတ်၍ အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်းယန္တရားနှင့်အရန်တံဆိပျ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အင်အားသုံး) ။ အရည်ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ စက်မှုတံဆိပျသည် slurry pump ၏ shaft seal အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ slurry pump ၏စက်တံဆိပ်ကိုဝယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
slurry pump ၏သုတ်လိမ်းမှုသည် slurry pump နှင့်အလွန်လျှံသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
၎င်း၏ပုံသဏ္aာန်သည်ခရုနှင့်တူသောကြောင့် slurry pump pump volute liner ကိုလည်း spiral case ဟုခေါ်သည်
slurry pump ၏ impeller
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ slurry pump ကိုလှိမ့်ဝယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အပိုပစ္စည်း ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော အပိုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!